केपी ओलीलाई लागेको रोग खासमा के हो ?
एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली यतिबेला मेनेजाइटिस रोगका कारण थाइल्याण्डको बैंककमा उपचाररत हुनुहुन्छ । खासमा केपी ओलीलाई लागेको रोग के हो ? कसरी यो मेनेजाइटिस रोग लाग्छ ? मेनिन्जाइटिस रोग एक प्रकारको संक्रमणबाट...
साधुलाई सुली, चोरलाई वरपिपलको छहारी
लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्ने हो । कार्यान्ययन कार्यपालिकाका रुपमा सरकारले गर्ने हो । र, त्यो विधि कानूनसम्मत रुपमा लागू गराउने भूमिका न्यायपालिकाको हो । यही अर्थमा यी तीन निकायलाई...